မွေးနေ့ဆုတောင်းစာလွှာလေးနဲ့အတူ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ကြူးလိုက်တဲ့ မေဦး - Cele Connections
မွေးနေ့ဆုတောင်းစာလွှာလေးနဲ့အတူ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ကြူးလိုက်တဲ့ မေဦး
ဟန်လင်းနဲ့မေဦးတို့ စုံတွဲကတော့ ရိုမန်တစ်ဆန်ပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သိပ်ချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရည်ချောမောကြတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ပရိသတ်တွေကတော့ ချစ်စနိုးနဲ့ ဟန်ဦးစုံတွဲဆိုပြီး တင်စားခေါ်ဆိုကြတာပါ။ မေဦးဟာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ မိတ်ကပ်ဖန်တီးရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဟန်လင်းကတော့ပန်းအလှဆင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့သူတွေဖြစ်တာနဲ့အမျှ သူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အားပေးဝန်းရံကြသူတွေကလည်း အများအပြားပါပဲ။
အချစ်ဟာ အချစ်ပဲဆိုတဲ့ တင်စားမှုနဲ့အတူ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ မြတ်နိုးစုံမက်မှုတွေဟာလည်း အများကအံ့သြရလောက်တဲ့အထိ လေးစားတန်ဖိုးထားစရာပါ။ သွားအတူ စားအတူနဲ့ အမြဲတတွဲတွဲရှိကြတဲ့ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဂရုစိုက်ကြင်နာတတ်ကြတဲ့ အပြုအမူလေးတွေကို ပရိသတ်တွေက ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာပဲ တွေ့တွေ့အားကျနေကြတာပါ။ ဒီနေ့က ဟန်လင်းရဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်တာကြောင့် မေဦးတစ်ယောက်ကတော့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်ကနေ သူသိပ်ချစ်ရသူအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းစာလွှာလေးနဲ့အတူ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖော်ကြူးထားပါသေးတယ်။ “Happy Birthday To My Chit Sone Lay …. ချစ်ကိုအများကြီးချစ်ပြီး ဂရုစိုက်သလို ချစ်တုံးကြီးကိုလည်း ထာဝရချစ်ပြီး အဖိုးကြီးဖြစ်တဲ့အထိ အနားမှာနေပြီး အများကြီးဂရုစိုက်မယ်နော်” … လို့ ရေးသားထားတာကြောင့် သူတို့ရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေကပါ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ အငွေ့အသက်တွေကို ခံစားနေရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဟန်လင်းတစ်ယောက် ယနေ့ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ချစ်သူလေး မေဦးနဲ့အတူ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ ဘဝခရီးလမ်းကို ဒီထက်မက အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ လျောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ပရိသတ်ကြီးနဲ့ထပ်တူဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးကလည်း ဟန်လင်းအတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးတွေကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါဦးနော်။
မှေးနဆေု့တောငျးစာလှာလေးနဲ့အတူ ခဈြခွငျးမတ်ေတာကိုဖျောကွူးလိုကျတဲ့ မဦေး
ဟနျလငျးနဲ့မဦေးတို့ စုံတှဲကတော့ ရိုမနျတဈဆနျပွီး တဈယောကျကိုတဈယောကျ သိပျခဈြကွတဲ့ ခဈြသူစုံတှဲလေးပဲဖွဈပါတယျ။ ရုပျရညျခြောမောကွတဲ့ သူတို့နှဈယောကျကို ပရိသတျတှကေတော့ ခဈြစနိုးနဲ့ ဟနျဦးစုံတှဲဆိုပွီး တငျစားချေါဆိုကွတာပါ။ မဦေးဟာ အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့ မိတျကပျဖနျတီးရှငျတဈယောကျဖွဈပွီး ဟနျလငျးကတော့ပနျးအလှဆငျသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူတို့နှဈယောကျဟာ ထငျပျေါကြျောကွားတဲ့သူတှဖွေဈတာနဲ့အမြှ သူတို့ရဲ့ခဈြခွငျးမတ်ေတာကို အားပေးဝနျးရံကွသူတှကေလညျး အမြားအပွားပါပဲ။
အခဈြဟာ အခဈြပဲဆိုတဲ့ တငျစားမှုနဲ့အတူ သူတို့နှဈဦးရဲ့ မွတျနိုးစုံမကျမှုတှဟောလညျး အမြားကအံ့သွရလောကျတဲ့အထိ လေးစားတနျဖိုးထားစရာပါ။ သှားအတူ စားအတူနဲ့ အမွဲတတှဲတှဲရှိကွတဲ့ သူတို့နှဈဦးရဲ့ တဈဦးကိုတဈဦး ဂရုစိုကျကွငျနာတတျကွတဲ့ အပွုအမူလေးတှကေို ပရိသတျတှကေ ဘယျအခြိနျ ဘယျနရောမှာပဲ တှတှေ့အေ့ားကနြကွေတာပါ။ ဒီနကေ့ ဟနျလငျးရဲ့မှေးနလေ့ေးဖွဈတာကွောငျ့ မဦေးတဈယောကျကတော့ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာထကျကနေ သူသိပျခဈြရသူအတှကျ မှေးနဆေု့တောငျးစာလှာလေးနဲ့အတူ ခဈြခွငျးမတ်ေတာကို ဖျောကွူးထားပါသေးတယျ။ “Happy Birthday To My Chit Sone Lay …. ခဈြကိုအမြားကွီးခဈြပွီး ဂရုစိုကျသလို ခဈြတုံးကွီးကိုလညျး ထာဝရခဈြပွီး အဖိုးကွီးဖွဈတဲ့အထိ အနားမှာနပွေီး အမြားကွီးဂရုစိုကျမယျနျော” … လို့ ရေးသားထားတာကွောငျ့ သူတို့ရဲ့ခဈြပရိသတျတှကေပါ ခဈြခွငျးမတ်ေတာရဲ့ အငှအေ့သကျတှကေို ခံစားနရေလိမျ့မယျထငျပါတယျ။
ဟနျလငျးတဈယောကျ ယနကေ့ရြောကျတဲ့ မှေးနရေ့ကျမွတျမှသညျ နောငျနှဈပေါငျးမြားစှာတိုငျ ခဈြသူလေး မဦေးနဲ့အတူ စိတျခမျြးသာ ကိုယျကနျြးမာနဲ့ ဘဝခရီးလမျးကို ဒီထကျမက အောငျမွငျမှုတှနေဲ့အတူ လြောကျလှမျးနိုငျပါစလေို့ ပရိသတျကွီးနဲ့ထပျတူဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။ Cele Connections ပရိသတျကွီးကလညျး ဟနျလငျးအတှကျမှေးနဆေု့တောငျးလေးတှကေို မှတျခကျြရေးခဲ့ပါဦးနျော။
” တဈယောကျတညျး အထီးကနျြနကွေောငျး ရငျဖှငျ့လာတဲ့ G-Fatt “
Covid 19 ရောဂါနဲ့ပက်သတ်ပြီး ကာကွယ်နေထိုင်မှုအကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေနဲ့ သန္တာလှိုင်
ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်လေးဖြစ်နေတဲ့ ဂြိုလ်သား မျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင်